aphawmon – A Phaw Mon
Please verify my website. Thanks.
ဒီမြို့ကတော့ အီတလီနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကာတာနီးယားပြည်နယ် ၊ စစ္စလီကျွန်းမှာတည်ရှိပြီး Grammichele လို့ခေါ်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမြို့ဟာ ဆဌဂံပုံစံတည်ဆောက်ထားပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှားပါးတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၆၉၃ ခုနှစ်တွင်လှုပ်ခတ်ခဲ့သောစစ္စလီငလျင်ဒဏ်ကြောင့် Occhialà မြို့ဟာပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ …
ချစ်သူများနေ့ ဖြတ်သန်းမယ့် အစီအစဉ်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer
လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer ကတော့ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်လောက် တွဲလာကြပြီး လက်ရှိမှာလည်း ပရိသတ်တွေ အားကျရတဲ့ စုံတွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အနုပညာလောကထဲမှာ …
ဗေဒင်လက္ခဏာပညာတွေဆိုတာက ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးလူတွေရဲ့ ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ကံတရားကိုတွက်ချက်ခန့်မှန်းပုံဖော်ပြီး မလုပ်သင့်တာမလုပ်ရအောင်၊ အညံ့တွေပပျောက်အောင်၊ ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်အောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးနေတဲ့ပညာရပ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဒင်ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ရော ဗေဒင်တွေကို ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လောက်သာဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ရောပြောချင်လွန်းလို့ရဲ့ တစ်ပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်းကဏ္ဍကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Aries …
လူ ၄၁ ဦး သေဆုံးပြီဖြစ်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကြောင့် တရုတ်မှာ မြို့ပေါင်း ၁၄ မြို့ကို ချိတ်ပိတ်
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသစ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၄၁ ဦးအထိ မြင့်တက်ရောက်ရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူပေါင်းလည်း ၁၃၀၀ နီးပါး ရှိလာချိန်မှာ ရောဂါထိန်းချုပ်မပြန့်ပွားစေရေးအတွက် မြို့ပေါင်း ၁၄ မြို့ကို အဝင်အထွက် …
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ဝူဟန်မြို့သူကို တူရကီအစိုးရ တရုတ်နိုင်ငံ ပြန်ပို့
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ဝူဟန်မြို့က လူနာကို တူရကီအစိုးရက လူနာတင် လေယာဉ်နဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်မှာ တရုတ်ပြည် ပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်။ တူရကီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက သံသယရှိလူနာရဲ့ ‌တောင်းဆိုချက်အရ …
ကိုရိုနာဗိုင်းရဗ်စ်ပိုးကြောင့် ဝူဟန်မှ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ပြေးဆွဲနေသည့် လေကြောင်းလိုင်းများအားလုံး ဖျက်သိမ်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်ကနေ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းကို မနေ့ကစပြီး ယာယီရပ်နားလိုက်တယ်လို့ အစိုးရပြန်ကြားရေး သတင်းက ဆိုပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၂၄ …
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှုကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာပေးဖို့ တိုက်တွန်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဂျော့ချ်တောင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံနဲ့ လုံခြုံရေးစင်တာက ဒေါက်တာ အလက်ဇန်ဒရီးယားဖီလန်ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှုကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာပေးဖို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး …
အီရတ်က အမေရိကန်စစ်စခန်း အီရန်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ ကန်စစ်သား ၃၄ ဦး ဦးနှောက်ထိခိုက်မှု TBI ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပင်တဂွန်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီလို TBI ဦးနှောက်ထိခိုက်မှု …